गाेरखामा चीनद्वारा सिमा मिचिएकाे छैन : साँसद अधिकारी – गोर्खा संसार
गोर्खा संसार२०७७, ७ मंसिर आईतवार १९:४१
मङ्सिर ५, गाेरखा ।
चीनकाे स्वसाशित क्षेत्र तिब्बतकाे सिमाना जाेडिएकाे गाेरखा जिल्लामा ३४ देखि ३९ नम्बरका ६ वटा पिलरहरु रहेका छन् । जङ्गे पिलरहरुले गाडिएकाे समयदेखि ठाउँ छाडेका छैनन् ।
दक्षिणी नाकामा राती सुत्दा नेपालमा र विहान उठ्दा भारतमा हुने अवस्था भएझै गाेरखाकाे सिमानामा त्यस्ताे अवस्था नरहेकाे स्थानीयहरु बताउँछन् ।
सिमा क्षेत्र नजिककाे गाउँमा भेटिएका निमा लामा आफू १२ वर्ष हुँदा अघिदेखि जङ्गे पिलर हुँदै तिब्बत जाने गरेकाे र आज आफू ६० वर्ष हुँदा पनि पिलर त्यहीँ देखेकाे बताउँछन् ।
सिमाकाे बारेमा स्थलगत अनुगमनका लागि गाेरखा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का साँसद हरिराज अधिकारी सिमा छेउ पुगेर फर्कीएका थिए । उनका अनुसार सिमा मिचिएकाे कुरा सत्य हाेइन । सम्झाैता अनुसार जहाँ पिलर गाडिएकाे थियाे त्यहाँ छ, गाेरखामा चीनले सिमा मिच्याे भन्ने कुरा झूठाे हाे । रुइ गाउँ बेशी र साम्दाे गाउँ बनाएर यहाँका नागरिकहरु बस्दै आएका थिए । सिमा निर्धारण नहुँदा सम्म भन्सार समेत कहिले तिब्बतले चलायाे त कहिले गाेरखा । नागरिकहरुले आधा कर तिब्बतमा आधा कर गाेरखामा तिरेका रेकर्ड समेत छन् । २०४१ सालमा साम्दाेका १२ घर परिवार रुइ गाउँतिर गएका रहेछन् उनले भने ।
साँसद हरीराज अधिकारीलाइ खादाद्वारा सम्मान गर्दै स्थानीय नागरिक । तस्वीर राजेन्द्र न्याैपाने
भिडियाे हेर्न लिङ्क क्लिक गर्नुहाेस् ।
नेपाल र चीनबीच सन् १९६० मार्च २१ मा भएको सीमा सम्झौताअनुसार संयुक्त सीमा समितिको गठन भई सन् १९६१ अक्टोबर ५ (२०१८ असोज १९) मा नेपाल र चीन बीच सीमा सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो । तत्कालिन समयमा राजा महेन्द्र र गणतन्त्र चीन तर्फबाट लिउ साओ ती ले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
अतिक्रमणकाे चपेटामा लिम्पियाधुरा र लिपुलेक पुस्तक पेज ३१४ । लेखक रतन भण्डारी
सिमाविद् रतन भण्डारीका अनुसार, सन् १९६१–६२ बीच नेपाल र चीनले संयुक्तरूपमा स्थलगत सीमांकन सम्पन्न गरेका थिए । नेपाल चीन सीमांकनका बेला टिंकर, मुस्तांग, लांगटांग, रालमु, नारा भंन्ज्यांग, थुदाम, लिमि, यांगरा हिमाल, किमाथांका क्षेत्रलगायत ३२ स्थानमा देखिएको विवाद दुबै देशले आपसी समझदारी र पंचशील सिद्धान्तअनुसार २ वर्ष ९ महीनामा टुंग्याइएका थिए ।
यसरी विवाद मिलाउने क्रममा दुवै देशले जमीन सट्टापट्टा गरेका थिए । सो क्रममा केही नेपाली गाउँ चीनतिर र केही चिनियाँ गाउँ नेपालतिर परेका थिए । त्यसरी गाउँ साटासाट हुँदा दुबै देशतिर परेका एक अर्को देशका नागरिकलाई नागरिकता दिने सम्बन्धमा १९६२ अगष्ट १४ (वि.सं. २०१९ साउन ३०) गते सम्झौता भएको थियो । सो क्रममा नेपाल र चीनले केही भूमि साटासाट गरेका थिए ।
नेपाल र चीनबीच भएको आपसी सहमतिअनुसार चिनिया भूभाग नेपालतिर र नेपाली भूमि चीनतिर परेको विवरण निम्नानुसार छः
नेपाल–चीनबीच सीमाकंनका क्रममा सट्टा–पट्टामा परेको भूभाग
नेपालबाट चीनतर्फ गएको जमीन
जिल्लाको नाम (क्षेत्रफल वर्ग कि.मी.)
ताप्लेजुङ १६.२५ (जम्मा क्षेत्रफल : १८३६.२५ वर्ग किलाेमिटर)
चीनबाट नेपालतर्फ आएको जमीन
जिल्लाको नाम (क्षेत्रफल–वर्ग कि.मी.)
ताप्लेजुङ २२०.७५ (जम्मा क्षेत्रफल : २१३९ वर्ग किलाेमिटर) स्राेत : लिम्पियाधुरा र लिपुलेक -रतन भण्डारी
गाेरखामा सिमा रेखा खाेलाबाट डाँडामा कसरी सर्न पुग्याे ?
नेपाली सरकारी अधिकार र चिनियाँ सरकारी अधिकारी वीच छलफल भइ सिमा स्तम्भ रुइ गाउँ भन्दा तल रहेकाे खाेलामा गाड्ने तयारी स्वरुप बालुवा, सिमेन्ट र गिटी तयारी गरेर खाल्डाे समेत खनिएकाे थियाे । यीङ गाउँमा भेँडीगाेठ भएका हावा बाजे भनेर चिनिने तत्कालिन अवस्थामा ८० वर्षिय वृद्धले गाउँका बुढा मानिसकाे कुरा नसुनी काम गर्न हुँदैन भन्दै सिमाना डाँडामा राख्नु पर्ने अडान लिए । वृद्धकाे अडान अनुसार नेपाल तिर पानी बग्ने भाग नेपाल र तीब्बत तिर पानी बग्ने भाग तिब्बत कायम गर्दै रुइला भन्ने डाँडामा जङ्गे पिलर गाडियाे । १९ किलाेमिटर तलबाट गाउँलेहरु बालुवा सिमेन्ट बाेकेर ल्याउनु परेकाे स्थानीय उर्गेन छुल्देल लामाकाे भनाइ छ । रुइ गाउँमा बस्नेहरु पनि हाम्रै दाजूभाइ खलक हुन आउजाउ भैरहन्छ । अहिले काेराेनाका कारण जान पाएकाे छैन, उनले भने ।
मनासलु डक कम बाट